Qoraal ku saabsan ka dib markii uu ka dhacay Charlottesville
Warbixinta soo socota ayaa waxaa si wada jir ah loo sii daayay guddoomiye guddoomiye ahna guddoomiye kuxigeen Meghan Binger Brown iyo madaxweyne Kate Wolford oo ka tirsan machadka McKnight Foundation.
Awood-cadaynta iyo neo-Nazism, iyo rabshadaha iyo argagixisada ay beertaan, ma laha dhulkan. Waxay uqaabilsan tahay in ereyadani ay u baahan yihiin in la sheego inta la siinayo inta askari, baabi'iyayaal, dhaqdhaqaaqayaasha xuquuqda madaniga ah, iyo muwaadiniinta caadiga ah ay naftooda ku daadiyeen xorriyad iyo sinnaan. Hase yeeshee, waxay soo baxdaa ereyadani waxay u baahan yihiin in la sheego - si cad, caqligal ah, iyo si joogta ah.
Waxaan aragnay falalka nacaybka abaabulan ee noo gaar ah. Meelaha xayawaanka lagu nadiifiyay ayaa la qarxiyay bamka masaajidka kaliya salaadda subax hore iyo khataraha xarumaha jaaliyadda ee halkaas oo carruurtu helaan daryeel.
Markaan dhaleeceyno dhacdooyinkan, ha ina illoobin nadaafad badan, habab aan la arki karin oo caqli-gal ah oo nacaybkeena ah waa inaynu ka gudubnaa. Xitaa sida bandhigyada nacaybka ah ee nacaybka si sax ah nagu soo daayo, xakameyn, falalka maalinlabaad ee midab-takoorka iyo baahida loo qabo in laga dhigo mid aan la aqbali karin. Tani waa masuuliyadeena wadaag ah.
Waxaan ku faraxsanahay inaan aragno dad badan oo doonaya rabitaan wanaagsan oo ku sugan gobolka iyo meelo kale oo u taagan xuquuqda aadanaha oo dhan. Waxaa sidoo kale naloo dhiirrigeliyay hoggaamiyeyaal badan oo bulshada ah, saraakiisha dawladda, iyo hogaamiyeyaasha ganacsiga waxaan leenahay mudnaanta weyn in ay la shaqeeyaan cidda ka shaqeyneysa aragtida wada noolaanshaha iyo barwaaqada.
Shaqada sinnaanta waa shakhsi, hay'ad, iyo bulsho. McKnight, dhammaan shaqaalahayaga oo dhan ayaa baaray sida aan u xoojin karno fahamkeena kala duwanaanta dhaqanka iyo doorka aan tooska ahayn. Nidaamkani wuxuu horseeday in uu dhexgalo iyo mararka qaarkood wada hadal aan habooneyn. Hase yeeshee, waxaan ognahay in ay lagama maarmaan tahay in aan nafteena eegno muraayada, oo leh hoos-u-dhac weyn, waydiiso sida aan si buuxda u muujin karno qiimaha iyo aragtida aan raadineyno beesheena iyo umadeena.
Mashruuca McKnight wuxuu sii wadi doonaa inuu taageero dadaalka lagu hormarinayo sinaanta, u istaagno beelaha si gaar ah loo bartilmaameedsado, iyo in la taageero isbeddel nidaamyo macquul ah oo u oggolaanaya in dhammaantood ay ku soo baxaan. Waddankayagu wuu xoogan yahay marka aynu wada joogno, waxaanu ku leenahay ilaalinta sharafta iyo qiimaha nolol kasta oo siman.
Credit credit - Karin Dalziel